Ciidanka Maraykanka ee Afghanistan oo la kordhinayo - BBC Somali
Ciidanka Maraykanka ee Afghanistan oo la kordhinayo
Image caption Ciidamada Maraykanka ee Afghanistan.
Mareykanka ayaa kordhinaya ciidanka ka jooga dalka Afghanistan oo waqtigoodu uu ku ekaa 2016ka, sida ay sheegeen maamulka dalkaasi.
Madaxweynaha mareykanka Barack Obama waxa uu shaaca ka qaadi doonaa qorshaha marka ay galabta u tahay Mareykanka.
Waxaa la filayaa in 5,500 oo askeri ay sii joogi doonaan Afghanistan marka uu shaqada ka tagaayo ee 2017ka.
Qiyaastii ciidamada badankood ayaa la filayay inay ka soo tagaan dhammaadka sanadka soo socda.
Laakiin militariga mareykanka waxa looga baahanaayaa inay caawiyaan ciidamada mareykanka si looga guuleysto xoogagga Taliban.
Hadda 9,800 oo askeri ayaa mareykanka kaga sugan Afghanistan. Isbuucii la soo dhaafay sarkaalka ugu sareeya ciidamada mareykanka ee dalka Afghanistan Gen John Campbell, waxa uu sheegay in Mareykanka uu dib u eegayo kordhinta waqtiga ciidamadiisa ay joogayaan Afghanistan oo dhammaaneysa 2016ka.
Ciidamada Mareykanka waxa ay saldhigyo ka sameysan doonaan afar goobood oo kala ah, Kabul, Bagram, Jalalabad iyo Kandahar.
War qoraal ah oo ka soo baxay golaha amniga ee mareykanka, waxaa lagu sheegay in isbedelka siyaasadeed ay ahayd isbadallo bilo socday, kaddib markii Mr Obama uu la tashiyo la sameeyay koox ka socotay aminiga qaranka iyo afar xubin oo ka socotay dalka Afghanistan.
Hadalkii uu isbuucii la soo dhaafay jeediyay, Mr Campbell waxa uu muujiyay walaaca laga qabo “xaaladda amni ee aan deganeyn”. Wuxuuna tilmaamay xoojinta joogitaanka military inay lagama maarmaan tahay haddii ay tahay in Taalibaan laga adkaado.